Updated: 2015-06-16 10:39
Updated: 2015-06-15 15:48
Updated: 2015-06-10 16:32
ဆာကူရာနယ်မြေ (ခုမမိုတို အဆို)
အဆိုတောရဲ့မြောက်ပိုင်းတွင် ရှိသော ဆာကူရာနယ်မြေဟာ အလွန်ပင်နာမည်ကြီးပြီး နွေဦးရောက်တိုင်း ဆာကူရာများက အလွန်လှပစွာပွင့်ဖူးလေ့ရှိပါတယ်။ ဆာကူရာအပင်များထဲတွင် နှစ်၄၀၀ကျော်သက်တမ်းရှိသော အပင်မှ...
Updated: 2015-06-09 15:09
အဲဒိုးခေတ် ၉နှစ်မြောက် (၁၆၃၂)တွင်ဟိဂိုအိုဆိုဂ၀အိမ်တော်ထိန်း တဒတိုရှိက ထိုနေရာတွင် ဆုအိဇင်းဘုရားကျောင်းကို ဆောက်လုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နိုချိဘုရားကျောင်းကို အခြားနေရာသို့ရွေ့ပြီး အိုဆိုဂ၀...
Updated: 2015-06-04 15:44
မြောက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိပြီးရေပူစမ်းများနှင့်ငရဲပြည်ခရီးများရဲ့အလယ်ဗဟိုမှာရှိနေပါတယ်။ မြက်ခင်းပြင်ကျယ်ကြီးနှင့်အတူ ကလေးကစားကွင်း၊ ကားပါကင်တွေလည်းအများအပြားရှိပါတယ်။ ကလေးကနေလူကြီးအထိအပန်းဖြေနိုင်သောနေရာ...